चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा चारजनाको नाम सिफारिस – Sourya Online
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा चारजनाको नाम सिफारिस
सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर ४ गते १६:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको चारवटा निर्देशक पदमा चारजना वरिष्ठ चिकित्सकको नाम सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस हुनेमा प्रा डा. रमेशप्रसाद आचार्य, प्रा डा. संगरत्न बज्राचार्य, प्रा डा. दिलीप शर्मा र प्रा डा. आरती साह रहेका छन् ।
निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कात्तिक १८ गते पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकामा उपकुलपतिमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ संघ छन् ।
यसैगरी आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईमा डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जनामा प्रा डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा डा. शैली प्रधान र प्राडा। जगदीश अग्रवाल रहेका छन् ।